यिनै हुन् पूजा शर्माको ‘राम’, कस्तो जम्ला जोडी ? « Ramailo छ
यिनै हुन् पूजा शर्माको ‘राम’, कस्तो जम्ला जोडी ?
टाइटलपछि सुदर्शन थापा र पूजा शर्माले निर्माण गर्ने फिल्ममा नायक पनि तय भएका छन् । माघको अन्त्यदेखि छायाँकन सुरु हुने ‘रामकहानी’ मा नायक आकाश श्रेष्ठले नायिका पूजा शर्मासँग रोमान्स गर्ने भएका हुन् । फिल्ममा केदार घमिरे माग्ने बुढा, जितु नेपाल, विल्सन वित्रम राई र रविन्द्र झा फाइनल भैसकेका छन् ।
नायिका तथा निर्मात्री शर्माले आकाश आफ्नो फिल्ममा नायकको रुपमा अनुबन्धित भएको खुलाइन् । ‘हो आकाश रामकहानीको हिरो हो’, पूजाले भनिन् । ‘म त तिम्रै हुँ’ बाट डेव्यु गरेका आकाश ‘चकलेटी लुक्स’का कारण युवतीमाझ ‘नोटिस’ भएका छन् । पूजा पनि फिल्म नै पिच्छे हिरो फेर्ने नायिकको रुपमा स्थापित भएकी छिन् । ‘प्रेम गीत’ मा प्रदीप खड्कासँग रोमान्स गरेकी पूजाले ‘म यस्तो गीत’मा पल शाहसँग स्क्रिन सेयर गरिन् ।
उसो त सुदर्शन थापाको फिल्मबाट प्रदीप र पलको फिल्मी करिअर ‘बुस्ट’ भयो । आकाशको करिअर चाही कस्तो होला त ? प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।